Shawaa Lixaatti Dhimma Filannoon Walqabateen Yoo Xiqqaate Nam Tokko Ajjeesamuu tu Dubbatama
Filannoo bara 2015
Hoogganoonni gamtaa paartiilee mormituu, ka Medrek akka jedhanitti, poolisoonni federaalaa taajjabdoota filannoo moggaatti dhiisanii, kaan buufta filannoo irraa hariyatanii korojoo filannoo fudhachuu yaaluu irraa wal-dhidee uumameen, aanaa Midaa-Qanyii keessatti namni Giddiisaa Camadaa jedhamu ajjeesame.
“Uummatni gumaa’ee akka korojoon filannoo seeraa ala hin hatamne, meetira dhibba shan irraa fagaatee eegaa ture.
Humni poolisii walii-galtee taajjabdootaa tii ala korojoo sana fudhatee deemuu ennaa yaalu, uummatni itti ka’e poolisoonni dhukaasuu jalqaban.
Haala kana keessatti Giddisaan dhawamee” jedhu, Itti-aanaa barreessaan Kongoiresa Federaalawa Oromoo – Obbo Dajanee Xaafaa. Namoonni ka bironis madaawanii akka hospitaalatti wal’aanamaa jiran dubbatu.
Bulchaan aanaa Midaa Qanyii, Obbo Magarsaa Gurmeessaa fi Itti-gaafatamaan waajira poolisii aanaa sanaa, Komaander Lalisaa Taakkelee garuu, Obbo Giddisaa camadaa madaawee gara Hospitaalaatti ergamuu malee du’uu isaa hin mikaneeffanne, jedhan.